Abaaraha ka taagan koonfurta Soomaaliya oo saamayn ku yeeshay suuqyada iyo dalabka dalagga ee Puntland. – Radio Daljir
Garowe, July, 28 – Abaaraha iyo macaluusha ka taagan Koonfurta Soomaaliya ayaa saamayn aad u ballaaran oo muuqata ku yeeshay suuqyada Puntland oo ku tiirsan wax-soo-saarka dhinaca beeraha ee Koonfurta Soomaaliya.
Suuqyada ayaa waxa aad ugu yaraaday, qaar badanna lagaba waayay dalagyada asaasiga ah ee isugu jira khudaarta, fawaakihda iyo dalagyada qalalan ee ay ka midka yihiin gallayda, digirta iyo masaggada. Dadka ka ganacsada dalagyada ka yimaada koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in ay si wayn sare ugu keceen ascaartii badeecada, iyada oo ganacsatadii yar-yaraydna ay qarka u saaran yihiin in ay suuqa ka baxaan qaarna ayba isaga bexeen.
Meelaha aadka looga dareemayo saamaynta ayaa waxa ka mida makhaayada waawayn ee laga cunteeyo oo qaarkood laga waayay cabbitaannadii laga miiri jiray fawaakih-da ay kamidka yihiin cambaha, muuska iyo liin bambeellada.
Puntland waxa ka jira beeralay yaryar oo u badan kuwa khudaarta, haseyeeshee maaha kuwo dabooli kara baahida suuqyada ee Puntland iyo dalabkooda, sidaa darteedna inta badan dalagyada beeruhu waxa ay ka yimaadaan Koonfurta Soomaaliya oo haatan ay ka dilaacday macaluul tii ugu darnayd muddo 50 sano ah.
Dadka Puntland ayaa walwal ka qaba in saamayntu intaa ka sii dari doonto haddii uu xaalki sida uu yahay ka sii daro, waxana haatan socda dadaal baaxad wayn oo ka socda dhammaan gobollada Puntland oo ay dadku isku dayayaan in ay gargaar la gaaraan dadka ku tabaalaysan koonfurta Soomaaliya.